बुद्धको गृहत्याग र यशोधरासम्पादन
बुद्धको गृहत्यागपछि कत्ति पनि विचलित नभई यशोधराले छोरा राहुललाई हुर्काइन्, शुद्धोधन र प्रजापति गौतमीलाई ढाढस दिई उनीहरुको सेवा गरिन् । प्रसिद्ध भियतनामी बौद्ध विद्वान थिक् न्यात् हन्ह र ओशोको भनाई के छ भने बुद्धलाई साधना मार्गमा लाग्न र सांसारिक आकर्षणमा नफस्न यशोधराले बराबर स्मरण गराइ रहन्थिन् । गृहत्यागको दिन बुद्धको प्रिय घोडा कन्थकलाई तयार गरी सारथी छन्दकलाई त्यो रात दरबारमै सुत्न लगाइन् । राति गृहत्याग पूर्व आफ्नो आजै जन्मेको बच्चा र पत्नीलाई अन्तिम पटक हेर्ने लालसा लिई जब बुद्ध खोपीमा आए, बुद्ध साहित्य अनुसार देवताहरुद्वारा बुद्ध मोहमा नफसून् भनी यशोधराको आंचलले राहुलको मुख छोपियो तर ओशो र थिक् न्यात् हन्हको भनाइ के छ भने वास्तवमा यशोधरा जागेकै थिइन् र उनले जानेरै बुद्ध ममता मोहमा नफसून् भनी आफ्नो र बच्चाको मुख छोपी दिइन् ।
बुद्धत्व प्राप्त भएपछि जब बुद्ध कपिलवस्तु आउनु भयो, बुद्धलाई दर्शन गर्न सबै आए तर यशोधरा आइनन् । बुद्ध नै सारिपुत्रलाई भेट्न जानु भयो । त्यहाँ यशोधराले बुद्धको पाउ स्पर्श गरिसके पछि एक गहन प्रश्न गरिन्- जुन सत्य तपाईंले निरन्जना नदीको तटमा बोधिवृक्षको मुनि प्राप्त गर्नु भयो के त्यो सत्य यहाँ छैन ? र यहाँ त्यसको बोध हुन सक्दैन ?
यशोधराको यो पक्षसम्पादन
बुद्ध साहित्यमा अनेक साधिकाहरु बिशाखा, आम्रपाली, प्रजापति गौतमी, खजुतरा, कृषा गौतमी इत्यादिको बारम्बार उल्लेख आउँछ तर प्रव्रज्यापछि यशोधराको कहीँ उल्लेख भेटिँदैन । यशोधराले संघमा आफूलाई म बुद्धकी पत्नी हुँ भनेर कुनै आदर मागिनन् र अति साधारण जीवन व्यतित गरिन् । उनी आश्रममा सफाइ र रोगीहरुको सेवाको कार्यहरु गर्थिन् । राहुल अर्हत्व प्राप्ति पछि बुद्धका दश गन्धर्वहरु मध्येका एक प्रमुख आचार्य भइसकेका थिए । एक बुद्ध पुरुषकी पत्नी तथा प्रमुख आचार्यकी आमा यशोधराले संघको कुनै महत्वपूर्ण पद नलिई नेपथ्यमै रहन स्वीकार गरिन् । बुद्धसंघमा पूर्णरुपले आफीलाई विलीन गरेकी यशोधराको यो पक्ष आफैँमा अति प्रशंसनीय छ ।
यशोधराको अन्तिम वार्तालापसम्पादन
यशोधराले बैशाख पूर्णिमाकै दिन ७८ वर्षको उमेरमा आफ्नो आराध्यसँग राजगृहीको बेनुवनमा गरेको अन्तिम वार्तालाप बडो मार्मिक छ । उनले आग्रह गरेकी थिइन्, अब म वृद्ध भएँ, शरीरका सबै अंग प्रत्यंगहरु थाके । मैले कोइलीकी राजकुमारी र शाक्यकी युवराज्ञी र बुद्धसंघकी भिक्षुणीको आफ्नो स्वधर्म निष्ठापूर्वक पूरा गरेकी छु । मलाई जातीय स्मृति भयो । विगतका अनेक जन्ममा कुनै न कुनै रुपमा मैले अनन्य प्रेम र समर्पणले तपाईंको सेवा गरेकी छु । तपाईंको अनुमतिले शरीर छोड्न चाहन्छु । बुद्धसंघ तथा तपाईंप्रति आफूले जीवनमा कुनै भूल गरेकी भए माफी पाऊँ । यति भनी बुद्धलाई तीनपटक परिक्रमा गरी आफ्नो कुटीमा आई बुद्धप्रति श्रद्धाले दीयो बालेर हृदयले बारम्बार प्रणाम गरी यशोधराले शान्त भावले शरीर त्याग गरिन् । 
राहुल मार्फत भेटसम्पादन
यो सुनेर यशोधराले गहभरि आँसु गराउँदै भनिन्, बाबु, त्यो सज्जन पुरुष जसको शरीरबाट सुनौलो तेज निस्किरहेको छ र जो लस्करै बसेका भिक्षुहरुको माझमा बस्नु भएको छ, उहाँ नै तिम्रो पिता हुनुहुन्छ । भिक्षु हुनुअघि उहाँ यस राज्यका उत्तराधिकारी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नजीकमा जाऊ र सोध, बुबा, म राजकुमार हुँ । त्यसैले भविष्यमा म राजा बन्नेछु । राजामात्र होइन राजाहरुको पनि राजा बन्नेछु । त्यसैले मलाई मेरो अधिकार दिनुहोस् किनभने छोरालाई बाबुको सम्पत्ति लिने अधिकार हुन्छ । सात वर्षको राहुल आफ्नी आमाको आज्ञा अनुसार बुद्धको नजिक पुग्यो र भन्न थाल्यो, महाश्रमण, तपाईंको छाया बडो शीतल छ ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=यशोधरा&oldid=771825" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन २७ फेब्रुअरी २०२०, ११:२२
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ११:२२, २७ फेब्रुअरी २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।